Irina Gubanov - लोन तारा
Irina Igorevna Gubanova - सोभियत र रूसी अभिनेत्री, जो 30 फिलिमहरु भन्दा मा तारा अङ्कित। श्रेणीमा - लामो समय को लागि मास्को फिलिम अभिनेता स्टुडियो थियेटर को एक अभिनेत्री, टिभी च्यानलहरू NTV, NTV + र कम्पनी "अटल बिहारी-भिडियो" मा, विदेशी चलचित्रमा वर्ण नक्कल, ज्यादातर काम थियो।
Irina Gubanova युद्ध को पूर्वसन्ध्या मा Leningrad मा जन्म भएको थियो। निकासी त्यो यूराल मा, Orsk शहर मा उनको आमा संग बिताए। युद्ध पछि तिनीहरूले आफ्नो पैतृक Leningrad फर्के।2वर्ष पछि, बुबा इरेन परिवार छोडेर। यो भयो जब त्यो मात्र सात वर्ष पुरानो थियो। तब देखि, मेरो आमा, Antonina Sergeevna Minaeva, उनको एक्लै उठायो।
9 वर्षको Irina एक र्नतकी को makings देखाए, र त्यो 1958 मा स्नातक जहाँ Vaganova Choreographic स्कूल, यो स्वीकार गरे। तर, यो एक र्नतकी बन्न गर्दैन। अझै पनि एक विद्यार्थी गर्दा, त्यो धेरै उपयुक्त नाम को debut लागि उनको पहिलो फिल्म तारा अङ्कित - "। अभागी" तर पनि विजेता टिकट अझै "Lenfilm" निमन्त्रणा प्राप्त, फैलयो छ। चाँडै, Irina को ब्यालेट ओपेरा प्रतिस्थापन, Tikhomirov गरेको "Spades को रानी" द्वारा निर्देशित यो सांगीतिक फिल्म Pauline को भूमिका जित्यो।
प्रेमको एक सानो बिट
राम्रो चलचित्र र प्रेम धेरै लगभग एक साथ Irina आए। सर्गेई Gurzo - यो स्टुडियोमा, त्यो उनको भविष्य पति भेटे।
उहाँले पहिले नै "जवान गार्ड", मा तारा अङ्कित थियो यो समय उहाँले सर्गेई Tulenin को भूमिका खेलेका जहाँ द्वारा तत्काल उहाँलाई एक सेलिब्रिटी-संघ गरे। यो तीव्र वृद्धि त अक्सर होता, केही लागि अभिनेता को psyche लागि थिएन। आफ्नो प्रतिभा हरेक प्रशंसक, रूसी परम्परा अनुसार, यो आफ्नो मूर्ति पेय रम्न आफ्नो कर्तव्य मानिन्छ, त्यो इसारा फिर्ता गरे, र यति मा - चिरपरिचित योजना।
Ironically सर्गेई Gurzo बुबा narcology मा एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थियो, तर पनि त्यो रक्सी निर्भरता लागि उपचार सुरु गर्न आफ्नो छोरा सम्भ्काउनु असमर्थ थियो। पूर्व पत्नी, Nadezhda Samsonova पनि एक "दैनिक पिउने" यो कल र अन्यथा आफ्नो प्रतिभा आदर बाहिर पति को प्रतिष्ठा सुरक्षा, आफ्नो रोग पहिचान भएन।
फलस्वरूप, Gurzo पत्नी एक निवास परमिट उहाँलाई robbed, को थिएटर अभिनेता देखि खारेज भएको थियो, र उहाँले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न प्रयास गर्न, Leningrad गर्न मास्को देखि सार्न बाध्य भएको थियो। उदाउँदो तारा Irina Gubanov उहाँलाई मा भाग्य परिवर्तन गर्न आशा प्रेरणाबाट। त्यो एक समय Iraida Gurzo लागि बन्ने, बदलामा आफ्नो नाम लिए। एक वर्ष पछि तिनीहरूले एक छोरी, अन्ना, तर परिवारको बारेमा मात्र सात वर्ष लामो (फेरि, यो "अभागी नम्बर" छ)।
Irina Gubanov - वर्ण अभिनेत्री
फिल्म-ओपेरा "Spades को रानी" 1960 मा जारी भएको थियो, र त्यो क्षण एउटा कलात्मक क्यारियर इरेन Gubanova-Gurzo सुरु हुन्छ। सुन्दर अभिनेत्री प्ले Pauline को भूमिका निर्देशक को ध्यान आकर्षित गरे, र यो भूमिकाको लाड प्यार र परिष्कृत aristocrats, एक विदेशी, एक "विदेशी" mentality संग princesses र महिलाहरु तय भएको थियो।
तर, 1963 मा Irina Gubanov आफ्नो प्रतिभा र अर्कोतर्फ संग देखाउन सक्षम थियो। फिल्म, एन आई "पहिलो ट्रलीबस" त्यो आकर्षक र स्त्री Svetlana Soboleva, शिक्षित र विवाह गर्न चाहने गर्नुभयो प्ले। बरु, त्यो एक ट्रली बस एक चालक बन्न निर्णय र यो पेशामा आफ्नो साँचो व्यक्तिको पेशा फेला परेन।
Heroines Gubanova अक्सर विदेशी effeminacy र sublimity फरक, वास्तवमा, वर्ण को बल, वा कुनै खास "chertovschinku" देखाए। "हरियो ढुवानी" यो Masha Dontsova, र "हिम रानी" को ELSA, र अन्य तस्बिरहरू एक नम्बर।
महाकाव्य, Sergey Bondarchuk (1965-1967) द्वारा सिर्जना - म दर्शक भूमिका molchalnitsy सोनी, Irina Gubanov brilliantly फिल्म "युद्ध र शान्ति" प्ले जो सम्झना। त्यो sidelines हुन र consciously सिकार को भूमिका वहन बाध्य केटी को जटिलता प्रकट गर्न सक्षम थियो।
अभिनेत्री सक्छ नै देखाउन नोबल मेडन लागि abbess अतिथि गृह - कमेडी को मामला मा, उदाहरणका लागि, सांगीतिक फिलिम एल Kvinikhidze "स्वर्गीय Swallows" (1976) मा उनले आमा कैरोलिना को भूमिका मा ठूलो थियो। Lyudmila Gurchenko,: यो अर्को त्यो "बराबर" महसुस कोसँग अभिनेता को साँच्चै तारकीय कम्पनी थियो Andrei Mironov, अलेक्जेन्डर Shirvindt र अरूलाई।
तर Irina Gubanov प्ले जसले, उनको चलचित्र सामान्यतया दर्शक द्वारा सम्झना छन्। थप - बिस्तारै तथापि, यसको भूमिका फिलिमहरु बीच कम विश्रामहरू भयो प्ले। तर त्यो सधैं त्यो निर्देशक खटाइयो तस्बिरहरू को सार व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छ। र यो Irina कुनै विशेष शिक्षा थियो कि प्रदान।
सर्गेई Gurzo Irina Gubanov चाँडै remarried संग जानेबेलामा पछि। उनको छनोट AH Arshansky क्षेत्र kinomenedzhmenta काम थियो। 1978 मा उहाँले नियुक्त गरिएको थियो, "Sovinfilm" को अध्यक्ष र Irina र पतिको मास्को सारियो। छोरी Irina Gubanova Leningrad मा आफ्नो आमा संग बसे।
मास्को मा, Irina आई 1990 को दशक को शुरुवात अघि काम भएको, को स्टूडियो थिएटर अभिनेता मा बसे। टेलिभिजनमा भूमिकाको voicing मा लगे एकै समयमा। तनाव हामी Leningrad मा बाँकी, दोस्रो आधा को परिवार को हेरविचार थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा exacerbated थियो।
चाँडै अभिनेत्री क्यान्सर संग को निदान भएको थियो। तर, समाचार ब्रेक थिएन बलियो महिला - त्यो आफ्नो आवाज तिनीहरूलाई जीवनको अन्य विकल्प जीवित जस्तै heroines को एक किसिम दिने, टेलिभिजन मा काम जारी राखे। साथै, उनको पछिल्लो फिल्म थियो जो वृत्तचित्र श्रृंखला "शीत युद्ध", को डब मा भाग। अप्रिल 15, 2000 एक अभिनेत्री थियो।
मृत्यु Iriny Gubanovoy को कारण - धेरै अभिनेता जीवन दावी एक रोग। केही समय यसको लक्षण पहिचान गर्न सक्ने। यो गर्न, आफैलाई सुन्न र आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न धेरै संवेदनशील। अभिनेता यस्तो स्पष्ट कुरा सामना गर्न कुनै समय छ। उहाँले मृत्यु बाबजुद आफूलाई आबद्ध थिएन, र, आफ्नो फिलिमहरु त्यागेर बस्न जारी छ।
11 फोटो संसारको अमीर मान्छे को एक घरमा लिइएका
सामान्य Andranik Ozanyan: जीवनी, काम, जीवन इतिहास र पुरस्कार
आदम Levayn र Behati Prinsloo: विवाह मोडेल र घुमाव
अभिनेता Geri Byuzi: जीवनी, चलचित्र र व्यक्तिगत जीवन
अभिनेता फाबिओ Assunson: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
एल एन Tolstogo द्वारा काम गर्दछ: सूची
अभिनेत्री Kemeron Dias: जीवनी, चलचित्र, व्यक्तिगत जीवन। तारा पुस्तक
एक पुच्छर संग वर्तमान कपाल
उत्पादन लागत केही प्रकारका विश्लेषण
शहर अर्कह्याङ्गेल्स्क क्षेत्र Velsk, Mirny, अर्कह्याङ्गेल्स्क
क्लिंट Malarchuk। के उहाँलाई भयो?
एक हवाइजहाज को कालो बाकस के हो? एक हवाइजहाज को कालो बक्स रंग कस्तो छ?
Neuraminidase inhibitors: प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन लागूऔषधको सूची
हामी समीक्षा के भन्न सक्छौं: "को सोफा को सूत्र" - यो राम्रो वा खराब छ?
अचम्मको नरिवल केक: फोटो संग नुस्खा
होटल3* Longuinhos बीच Resort (भारत / गोवा): समीक्षा र पर्यटक फोटो